Semalt iyo SEO
Adduunyada casriga ah ee casriga ah, waxaan dhammaanteen maqalnay waxtarka ay leedahay abuuritaanka degel, sameynta joogitaan khadka tooska ah iyo u beddelashada booqdayaasha shabakadda inay noqdaan macaamiisha lacagta siisa.
Bilaabida degel waa mid xiiso leh laakiin waa bilowga kor u qaadista ganacsiga qadka. Hubinta in laga heli karo makiinadaha raadinta iyo in kor loogu qaado natiijooyinka Google waa halka shaqada adagi runtii ka bilaabato.
Waa tan sheeko deg deg ah oo adiga kugu saabsan. Waxay ku saabsan tahay milkiilaha ganacsigu inuu bilo waqti iyo dadaal geliyay degel cusub oo dhalaalaya si uu u dardar geliyo adeegyadiisa iyo wax soo saarkooda. In kasta oo dadaalkii ugu fiicnaa iyo isku dayo la doonayey in lagu xoojiyo taraafikada, mareegtu waxay ku jirtay halka ugu hooseysa darajooyinka mashiinnada raadinta maalgashiguna way ku guul darreysteen inay u beddelaan iibka.
Dhawaqa yaqaan? Nasiib wanaagse, maahan inay sidan ahaato. Adeegsiga SEO iyo falanqaynta websaydhka, websaydha ayaa la beddeli karaa si ay ugu dhufato meelaha ugu sarreeya raadinta internetka.
Sida waxyaabo badan oo nolosha ah, adeegsiga khibrad yar ayaa mari kara dariiq dheer marka ay timaado SEO. Ka fikir farqiga u dhexeeya ka shaqeynta jimicsi kaligiis ama tababbaraha shaqsiyeed. Natiijooyinka had iyo jeer way fiicnaanayaan, dhakhso badan oo sii dheeraadaan markii aad la shaqeyneyso tababare. Isla habkaas ayaa lagu dabaqi karaa abuuritaanka joogitaanka internetka ee guusha leh iyada oo la diiwaangelinayo taageerada SEO iyo khubaro suuq-geyn si ay uga caawiyaan meheraddaada in ay kor ugu kacdo darajooyinka mashiinka raadinta.
Semalt waxaa dhisey koox khubaro noocan oo kale ah waxayna ka caawineysaa macaamiisha adduunka inay kor u qaadaan astaantooda internetka muddo ka badan toban sano. Aynu eegno cidda ay yihiin iyo waxay qabtaan.
Isku soo wada duuboo , Semalt waa Hay'ad Digital buuxa ah oo hadafkeedu yahay in ganacsiyada khadka tooska ah laga dhigo mid guuleysta. Iyada oo xarun ku leh Kyiv, Ukraine, Semalt wuxuu la shaqeeyaa macaamiisha adduunka oo dhan isagoo bixinaya dallacsiin SEO ah, horumarin websaydh ah iyo adeegyo falanqeyn oo horumarsan, iyo sidoo kale abuurista sharraxa tusmada fiidiyowga.
Semalt waa koox in ka badan 100 hal abuur leh IT iyo xirfadlayaal suuq geyn - oo ay ku jiraan xayawaanka lambarada deggan Turbo - oo xididdadooda si adag loogu dhejiyay tikniyoolajiyada dijitaalka ah. Wada shaqeynta iyo wadaaga sanadaha khibradaha, kooxda Semalt waxay abuurtay xalka SEO asalka ah si ay uga caawiso macaamiisha inay gaaraan xiisaha ugu badan ee boosaska khadka - sare ee natiijooyinka raadinta Google.
Sida qofkasta oo isticmaala internetka uu u ogaan doono, ka muuqashada meelaha sare ee natiijooyinka mashiinka raadinta waa dahab dahab ah. Kaliya maahan mid kor u qaadaya aragtida iyo kor u qaadista taraafikada websaydhada, laakiin ganacsiyada khadka tooska ah, waxay sidoo kale horseedi kartaa soo jiidashada macaamiisha badan iyo kordhinta iibka.
Marka sidee u shaqeysaa? Asal ahaan, waxaa jira laba xulasho: AutoSEO iyo FullSEO. Laakiin marka hore, kuwa idinka mid ah oo aan weli hubin macnaha SEO, halkan waa koorso yar oo burbursan.
SEO waxay u taagan tahay kobcinta Mashiinka Raadinta. Taasi micnaheedu waa in matoorada raadinta sida Google ay ka heli karaan maqaalkaaga, bartaada, ama websaydhka ka dhexyaalla dunida ugu buuqsan ee waxyaabaha ku jira internetka isla markaana ku dhex dhiga natiijooyinkooda raadinta. Waxyaabaha ugu badan ee lagu kalsoonaan karo ayaa loogu talagalay algorithms-ka mashiinnada raadinta, ka dibna natiijada sare ee natiijada ayaa soo bixi doonta.
Waxay u muuqataa wax fudud laakiin makiinadaha raadinta ayaa si joogto ah u beddelaya algorithmkooda, taas oo macnaheedu yahay wixii laga yaabo inay soo shaqeeyeen sanadkii hore, ma noqon doonaan kuwo wax ku ool ah sanadkaan. Waxaa jira maqaallo tira badan oo laga heli karo internetka oo leh talooyin ku saabsan sida kor loogu qaado SEO, laakiin mid ka mid ah aaladaha ugu waxtarka badan ayaa ah adoo adeegsanaya ereyada muhiimka ah ee ku habboon websaydhka oo dhan. Kadib, waxaad dooneysaa inaad ka fekerto astaamaha meta, oo aad u fiicnaato cinwaannada iyo sawirrada, isku xirka dhismaha iyo abuurista waxyaabo gaar ah.
Dhammaan waxyaabaha kor ku xusan waxay qaadanayaan waqti iyo qorsheyn, iyo milkiileyaal badan oo ganacsi, waqti waa qaali (ama mararka qaarkood badeecad naadir ah). Taasi waa meesha adeegyada sida AutoSEO iyo FullSEO ay kaa caawin karaan.
AutoSEO waa aalad loogu talagay ganacsatada yaryar ee doonaya inay kordhiyaan taraafikada goobta laakiin waxaa laga yaabaa inaysan aqoon u lahayn SEO isla markaana aysan dooneynin inay sameeyaan maalgashi weyn ilaa ay ka arkaan natiijooyinka dhabta ah.
Adeeggu wuxuu ku bilaabmayaa warbixin kooban oo ku saabsan xaaladda degel ee hadda jira, oo ay ku xigto falanqayn buuxda oo uu sameeyo khabiir ku takhasusay SEO-ga si loo ogaado khaladaadka loona garto horumarinnada in la sameeyo. Injineer SEO ah ayaa markaa doorta ereyo-abuuraya furaha taraafikada ee ku habboon bogga iyo ganacsiga ay dallacsiiyaan. Marka xigta, tikniyoolajiyada Semalt waxay bilaabeysaa dhisida xiriirinta ilaha webka ee sida aadka u la xiriira, iyada oo goobaha lagu xushay iyada oo loo eegayo da'da da 'yarta iyo Google Trust Rank.
Marka qalabku meesha yaallo, Semalt wuxuu siiyaa macaamiisha cusbooneysiin maalinle ah oo ku saabsan sida keywords loo dallacsiiyay, iyo warbixinno falanqeyn joogto ah oo lagu qiimeeyo waxqabadka ololaha.
FullSEO waxay siisaa xalal isku dhafan oo SEO ah ganacsiyada waa weyn, dadka wata dhowr shirkadood, ama kuwa diyaar u ah inay lacag yar ka badan ku maalgashadaan wanaajinta websaydhka iyo ka faa iideysiga SEO.
Adeegga fullSEO wuxuu raacayaa mabaadi'da la midka ah ee AutoSEO, laakiin xalalka la soo jeediyay waxay ku saleysan yihiin falanqayn qoto dheer, oo ay ku jiraan dib u eegista tartamayaasha, waxayna dammaanad ka qaadaysaa kobaca taraafikada ee websaydhada leh heer sarreysa. Asal ahaan waa qalab loo soo diro degel sare natiijada natiijooyinka raadinta Google - dhakhso.
Adigoo adeegsanaya FullSEO, kooxda Semalt waxay xaqiijineysaa in degel websaydh si buuxda ula jaan qaada heerarka SEO. Tan waxaa loo sameeyaa iyada oo la wanaajiyo bog gudaha ah iyo hagaajinta khaladaadka, sida abuurista calaamadaha meta ee ereyada muhiimka ah, hagaajinta bogga HTML-ka, ka saarida xiriirrada jaban iyo xoojinta isku-dhejinta websaydhka. Faa'iidooyinka kale ee xirmada FullSEO waxaa ka mid ah caawimaad buuxda oo laga helo Semalt xagga horumarinta bogga iyo abuurista maaddada ku habboon-SEO. Natiijadu waa soo laabasho togan oo ku aaddan maalgashiga iyo natiijooyinka muddada dheer.
Sidaad u maleyneyso inaad maleyneyso hadda, furaha ka dambeeya adeegyada SEO ee Semalt waa adeegsiga falanqaynta si loo abuuro xalka u gaarka ah macaamiil kasta. Si kastaba ha noqotee, ereyga "falanqeeyaha websaydhka" wuxuu dhalin karaa jahwareer, markaa aan dib u eegno waxa ay ka dhigan tahay iyo sida nidaamka loo adeegsado Semalt.
Falanqaynta websaydhadu waa aalad loo isticmaalo in lagu kormeero waxqabadka suuqgeynta internetka, iyo sidoo kale lasocodka booska suuqa ee ganacsigaaga iyo tartamayaasha.
La socodka joogtada ahi waxay muhiim u tahay fahamka baaxadda buuxda ee suuqa ganacsiga. Kaliya kaliya kama caawinayso samaynta ereyada muhiimka ah ee SEO iyo isha ku haynta waxqabadka tartamayaasha, laakiin waxay sidoo kale tilmaami kartaa fursado cusub oo loogu talagalay horumarinta sumad ahaan aasaaska gobolka, ama habab cusub oo loogu talagalay qaybinta wax soo saarka.
Xirmooyinka Semalt wuxuu siinayaa marin u helitaanka dhammaan macluumaadka lafogista ee looga baahan yahay dabagalka kobaca websaydhka iyo aqoonsashada wixii carqalad ah ee ka hor imaan kara. Waxaa ka mid ah cusbooneysiinta qiimeynta waqtiga-dhabta ah, warbixinnada calaamadda cad-cad ee loogu talagalay soo-bandhigidda natiijooyinka iyo xog ikhtiyaar u ah gelinta barnaamijka iyada oo loo marayo Semalt's API. Sidoo kale waa qiimo jaban laakiin waxay abuurtaa aragtiyo wax ku ool ah si ay uga caawiso wargelinta istiraatiijiyadaha SEO. Adeegsiga falanqeeyeyaasha websaydhadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah halxiraalaha SEO iyo, iyadoo la kaashanayo khubaro, waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo degel aalad ganacsi wax ku ool ah.
Macaamiisha farxadda leh ee Semalt
Semalt wuxuu kashaqeynayey inka badan 5,000 oo boggag internet wuxuuna macmiilka liis gareeyaa adduunka oo dhan ganacsiyada udhaxeeya caafimaadka iyo fayoqabka ilaa tikniyoolajiyada iyo hantida. Macaamiil badan oo faraxsan ayaa soo sheegay natiijooyin wanaagsan iyadoo Semalt uu si joogto ah uga helayo dulmarka ugu sarreeya ee Google iyo Facebook.
Mid ka mid ah macmiilka faraxsan ee noocaas ahi waa tafaariiqle internetka oo ku saleysan UK kuna takhasusay badeecada malab iyo ceyriinka. Ujeeddadu waxay ahayd in shirkadda laga dhigo darajada 10-aad ee Google iyo in la kordhiyo taraafikada dabiiciga ah websaydhka. Lix bilood gudahood markii la isticmaalay adeegga FullSEO, taraafikada ayaa kordhay boqolkiiba 4,810, booqashooyinka billaha ah ee shabakadda ayaa kordhay 12,411 tirada tirada ereyga ee Google TOP-100 waxay sare uga kacday 147 ilaa 10,549. Macmiilka waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay sanduuqa "Dadka Sidoo Kale Weydii" Google, taasoo sii kordhinaysa isu socodka dabiiciga ah goobta.
Sidee Semalt u qabtay? Natiijooyinka waxaa lagu gaadhay iyada oo laga bilaabayo xisaab hubin qoto-dheer oo xagga farsamada ah si loo ogaado meelaha u baahan in la wanaajiyo. Hantidhawrka ayaa waxaa xigay istiraatijiyad dib loogu cusboonaysiinayo websaydhka, sida wanaajinta PageSpeed, dib-u-habeynta websaydhka iyo abuuritaanka waxyaabaha ku jira SEO. Intaa ka dib, Semalt wuxuu bilaabay kobcinta websaydhka iyada oo qayb ka ah xirmada FullSEO iyada oo loo marayo olole dhisme iskuxiran oo horumarsan. Inta soo hartay, sida ay yiraahdeen, waa taariikh.
Si aad u hesho daraasado dheeraad ah oo macaamiisha farxadda leh ee Semalt, booqo websaydhka halkan.
La shaqeynta Semalt
Hadda oo ah SEO iyo falanqeeyaha websaydhka ayaa la sharraxay, maxay la mid tahay la shaqaynta Semalt?
Marka hore, Semalt waa shirkad caalami ah sidaa darteed helitaanka luqad la wadaago ma ahan dhibaato. Xubnaha kooxdu waxay ku hadlaan Ingiriis, Faransiis, Talyaani iyo Turki, iyo kuwo kale.
Marka labaad, bilaabida AutoSEO way fududahay tijaabada 14-maalmood oo kaliya $ 0.99. Tan waxaa la raacayaa ikhtiyaarka xulashada qorshe lagu ordo muddo bil ah, saddex bilood, lix bilood ama hal sano. Waa hab wanaagsan oo lagu tijaabiyo adeega kahor intaadan ku boodin FullSEO.
Ugu dambeyntiina, Semalt wuxuu siiyaa taageerada macaamiisha 24/7, taasoo micnaheedu yahay in meel kasta oo aad dunida ka joogto, waxaad la xiriiri kartaa xubin ka mid ah kooxda si aad u hesho caawimaad iyo talo. Xitaa waad kula kulmi kartaa kooxda khadka tooska ah adigoo booqanaya boggayaga About -ka ee websaydhka.